#1 Tantara any an-kafa... ao “Burundi” : Milavo lefona ireo taxis-moto noho ny kolikoly - Transparency International - Initiative Madagascar
#1 Tantara any an-kafa... ao “Burundi” : Milavo lefona ireo taxis-moto noho ny kolikoly
Nivoaka ny 01 Martsa 2016 ao amin'ny Tantara any an-kafa
Maro ireo taksy-môtô no tsy hanohy intsony ny asan’izy ireo ao amin’ny lehiben’ny faritanin’i Makamba.
Nanazava tamin’ny SOS Médias Burundi ireo izay mbola mivelona amin’io asa io fa aleon’izy ireo mijanona nohon’ny tsolitra takian’ireo polisy aminy.
«Tsy afaka hiaritra izao intsony izahay. Miasa anaty fatiantoka. Isaky ny mandeha eny an-dalana isa-maraina dia tsy maintsy miatrika sazy mavesatra foana” hoy ilay mpitondra môtô tamim-pahakiviana. “Na ny polisy manao fanamiana na ny tsy manao dia mitaky vola aminao foana ary tsy mandray latsaky ny roa alina vola borondiana (manodidina ny 13 dolara). Ary izany rehetra izany dia tsy misy taratasy” hoy hatrany izy.
Mpitondra môtô iray hafa izay hita tany anaty toeram-pivarotana iray nisafidy ny hanao asam-barotra kely no nanazava: ”Isan’andro aho dia efa mandoa efa ho dimy alina (manodidina ny 53 dolara) na mihoatra aza. Eritrereto hoe izany vola izany no aloha amin’ireo polisy ary tsy misy taratasy! Soa fa mba ahy ilay môtô. Loza mantsy no mahazo ireo izay mbola handoa vola any amin’ireo mpampiasa azy ireo! Naleoko namidy ilay môtôako ary nanokatra ity varotra keliko ity aho”. Ary namehezany azy: “Miasa ho an’ny polisy fotsiny ihany raha amin’izao no mividy môtô ho atao taksy”.
Olona iray fahatelo koa dia nanambara trangana kolikoly iray hafa :”Hatramin’ny mpitandro ny filaminana any amin’ny ambaratonga ambany dia mangalatra! Ny taratasy anefa tsy misy ka lasa tsy afaka manazava amin’ireo mpampiasa anay akory izahay. Misy fotoana efa ho herinandro izahay no tsy mandrotsaka vola any amin’izy ireo”, hoy ity olona ity tamim-pahakiviana. Ny tenany izay mieritreritra ny hijanona ihany koa.
Nanamafy ireo mpitondra moto fa nihena be ny isan’ireo mampiasa môtô noho io kolikoly goavana io. Araky ny hevitr’izy ireo dia ao amin’ny tanànan’I Nyanza Lac irery ihany no mba milamina ny toe-draharaha. “Mila mandrotsaka 5 arivo vola borondiana (manodidina ny 53 dolara) ao amin’ny talen’ny paositra isam-bolana fotsiny dia afaka miasa am-pilaminana” hoy ny fanazavan’izy ireo.
lahatsoratra nosoratan'i SOS Medias Burundi
Sary: ©DWJ Johannsen